Iindaba-Blechexpo / Schweisstec 2019
IBlechexpo / iSchweisstec 2019
Ilanga — Iholo 7-7009
Njengoko bekulindelekile, i-14 ye-Blechexpo yorhwebo lwamazwe aphesheya olusebenzayo lweshiti, kunye ne-7th Schweisstec yorhwebo lwamazwe aphesheya yokujoyina itekhnoloji, yayiyimbalasane yoshishini kwaye ivaliwe ngempumelelo nababonisi abangama-1498 abavela kumazwe angama-36. Iindwendwe ezingama-41,152 eziphuma kumazwe ali-113 zizonke zisebenzise i-duo ye-fair fair, ethi okwangoku ikhule iye kwi-108,000 yeemitha zesikwere sendawo yomgangatho wokubonisa, ukuze bazise ngokumalunga nephepha lesinyithi, umbhobho kunye nokuqhutywa kweprofayili, Kunye nokusika, ukujoyina, ukwenza kunye nokudibanisa ubuchwepheshe, ukusuka nge-5 ukuya kwi-7 kaNovemba, 2019.
Oko kwasekwa inkampani i-Xinlian welding (i-Brand Sunweld), siye sachongelwa ukuvelisa uthotho lweetotshi ze-MIG / MAG, iitotshi ze-TIG welding, iitotshi zokusika iplasma yomoya kunye nezinye izinto ezinxulumene noko. Iimveliso zethu zidlulisile ukuqinisekiswa kwe-CE, isatifikethi seRoHS, iintlobo ezipheleleyo kunye neenkcukacha, umgangatho ophezulu kunye nexabiso lokhuphiswano Ngomgangatho obalaseleyo kunye nenkonzo egqibeleleyo, inkampani iphumelele ukubonwa ngokubanzi kunye nendumiso ngamxhelo mnye evela kubathengi. Iimveliso zayo zithengiswa kakuhle kumazwe angaphezu kwama-50 nakwimimandla, kwaye iseke ubuhlakani bexesha elide kunye neenkampani ezininzi ezaziwayo.
Inkampani ihlala isebenzisa umgaqo "wokuqala wobulunga, umthengi kuqala", ulawula ngokungqongqo umgangatho, ubambelela kwicala lophuhliso lobuchule "lokuphila ngomgangatho, kwaye uqhubeka ngokwenziwa kwezinto ezintsha", ubeke iseyile kwaye uqhubele phambili, kwaye uzise ngakumbi kubathengi Intsimi ebanzi Ixabiso lemveliso kunye namava angcono omsebenzisi.
"Ukufuna ukugqwesa akunasiphelo, ukuhambela phambili kunye namaxesha kunye nokudala ikamva", sijonge phambili ekusebenzeni kunye nani ukuqhubela phambili kunye kwimeko yokuphumelela!
Iqela lethu liya kuba kwiHolo yeNdawo 7-7009, apho iintlobo ngeentlobo zeMIG TIG Plasma zikhona Wamkele utyelelo lwakho!